तिहारको सांस्कृतिक मौलिकता जोगाऔं
डा. जगमान गुरुङ संस्कृतिविद् एवं उपकुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
लामो कालखण्डसम्म घुमन्ते जीवन बिताएको मानिसको विकासक्रममा हलो जोत्न थाल्नुलाई ठूलो क्रान्तिका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले उक्त क्रान्तिसँगै मानिसको जीवनमा जोडिएका गाई, गोरुका साथै अन्य पशुपक्षीलाई पुज्ने चाड तिहारको इतिहास घुमन्ते युगसम्म पुग्ने संस्कृतविद् डा. जगमान गुरुङ बताउँछन् । प्रस्तुत छ, तिहारका सन्दर्भमा संस्कृतविद् डा. गुरुङसँग आर्थिक अभियान दैनिकका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
तिहारको शुरुआत कसरी भयो ?
तिहार भारतीय भाषाको ‘त्यौहार’ शब्दबाट नेपालीमा आएको हो । यसको अर्थ चाडपर्व हुन्छ । तर नेपालमा कात्तिकको यमपञ्चकलाई मात्र तिहार भनिन्छ भने भारतमा जुनसुकै चाडलाई त्यौहार भनिन्छ । नेपालमा तिहार मनाइए जस्तै भारतमा दिवाली (दीपावली) मनाइन्छ । तर दीपावली र तिहार फरक हुन् । नेपालको तिहार र भारतको दीपावलीमा सांस्कृतिक विविधता छ । तिहार कहिलेदेखि मनाउन शुरू गरियो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । तर यसको इतिहास लामो छ ।
यसको महङ्खव के छ ?
यमपञ्चकले मानिसको घुमन्ते युगदेखि अहिलेको सभ्य समाजसम्मको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामी यम भन्नेबित्तिकै डरलाग्दो मुखाकृति भएको यमराज सम्झिन्छौं । काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार र मान्छे तिहार अर्थात् भाइटीका । यसकारण यमपञ्चक नियम हो । नियम भनेको विधान र विधान धर्म हो । यमपञ्चकका यी ५ दिनले मानव जीवनको पाँचओटा मानव संस्कृतिको पाँचओटा शृंखला बताएको छ । मानव अहिलेको सभ्य र सुसंस्कृत समाजसम्म घुमन्ते युग, शिकारी युग, पशुपालन युग, कृषि युग हुँदै आइपुगेको हो । यमपञ्चकका ५ दिन यसका प्रतीक हुन् । काग तिहारले घुमन्ते युग, कुकुर तिहारले शिकारी युग, गाई तिहारले पशुपालन युग, गोरु तिहारले कृषि युग र भाइटीका अर्थात् मान्छे पूजाले सभ्य र सुसंस्कृत समाजको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसकारण यसको महŒव विशाल छ ।
तिहार पर्वको शुरुआत कसरी भयो ?
तिहारको पौराणिक र वैदिक गरी दुई कथा छन्, जुन कथामा भिन्नता छ । कात्तिक शुक्लपक्षको द्वितीयालाई यम द्वितीया मान्नुको पौराणिक कथामा यम र यमुनाको कथा छ । ऋग्वेदअनुसार यम र यमी दुई जुम्ल्याह दाजु बहिनी हुन्छन् । उमेरावस्था पुगेपछि बहिनी यमीले दाजुलाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिन प्रस्ताव गर्छिन् । यस कथाले त्यतिबेलाको संस्कृति त्यस्तै हुन सक्ने पनि देखाउँछ । त्यसपछि यमले बहिनी यमीलाई दाजु बहिनी सम्बन्धमा बाँधिन नहुने भनेर सम्झाउँछन् । दाजु बहिनीको सम्बन्ध पवित्र हुने भन्दै उनले बहिनीलाई परपुरुष खोज्न सुझाव दिन्छन् । त्यसपछि दाजु बहिनीको पवित्र सम्बन्ध भएको स्पष्ट गर्न यमीले यसै दिनमा यमलाई टीका लगाइदिएको भनिन्छ । त्यस्तै अर्को पौराणिक कथाअनुसार तिनैलोकका शक्तिशाली बली राजालाई भगवान् विष्णुले झुक्काएर मत्र्यमण्डल आप्mनो अधीनमा लिएको कथा छ । विष्णुले मत्र्यमण्डल आप्mनो अधीनमा लिएपछि बलीले आपूm कहिले मत्र्यमण्डलमा आउन पाउने भन्ने सोधेपछि उनले यमपञ्चकका ५ दिन मत्र्यमण्डल आउन पाउने बताएका थिए । त्यसकारण असाध्यै धनी राजा बलिको स्वागतका लागि मत्र्यलोक गरीब छैन भन्ने देखाउन तिहारमा झिलिमिली गर्ने चलन चलेको हो । देउसी भट्याउँदा भनिने बली राजा भने अर्कै हुन् ।
देउसी खेल्ने चलन कसरी शुरू भयो ?
देउसी भट्याउँदा भनिने बलिराजा जुम्लाका राजा बलि हुन् । पूर्वमध्यकालमा खसराज्यको अन्त्य भएपछि जुम्लामा बलिराजको शासन चलेको थियो भन्ने इतिहास छ । काश्मिरबाट आएका चन्दननाथले उनलाई राजा बनाए भनिन्छ । घरदेश छाडेर तीर्थ हिँडेकी एक गर्भिणी जुम्लाको कल्लई गाउँमा आएर बास बसेपछि त्यहीँ बलिराजको जन्म भएको थियो । त्यसपछि काश्मिरबाट आएका चन्दननाथले उनलाई राजा बनाएको भनिन्छ । ती बलिराजले त्यो ठाउँमा भएका देवदास देवदासीलाई डुल्दै माग्दै खान अनुमति दिएर पठाएपछि देउसी भैलोको चलन चलेको थियो ।
सप्तरंगी टीकाको वैज्ञानिक कारण के होला ?
सप्तरंगी टीका सौर्य ऊर्जाको प्रतीक हो । सूर्य रथमाथि चढेको हुन्छ र सूर्यलाई सात फरक रङका घोडाले तानेका हुन्छन् । यही सौर्यशक्तिको रूपमा सप्तरंगी टीकाको विकास भएको हो । ज्ञान तेस्रो नेत्र हो, जुन नेत्रलाई सौर्य ऊर्जाले खोल्छ । ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोल्न सप्तरंगी टीकाको चलन चलेको पाइन्छ । शुरूमा बेसार टाँसेर चामलको पीठो सप्तरंगी टीकाको रूपमा लगाउने गरिएकोमा आधुनिक टीकाको विकास र विस्तार धेरैपछि भएको हो ।
अहिले विकास भइरहेको देउसीको संस्कृतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
समयक्रमसँगै देउसी भैलो खेल्ने, अन्न र द्रव्य संकलन गर्ने, चन्दा उठाउन पठाएको पत्र जस्तो पैसा तोकेर पत्र पठाउने लगायत विकृति तिहारमा बढ्दै गएका छन् । अहिले कतिपयले यसलाई दबाब सृजना गरेर आर्थिक संकलन गरी माग्ने भाँडो बनाएका छन् । डेक–डिस्को संगीत बजाएर हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण हुँदैन । देउसी हाम्रो मौलिक संस्कृति अनुसार खेलिनुपर्छ, चन्दा उठाउने परम्पराको विकास गर्न दिनु हुँदैन । यसरी संस्कृति नै लोप हुनेगरी मौलाएको विकृति त बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
तिहारलाई धनसँग जोडेर पनि हेरिन्छ, यसको आर्थिक महङ्खवबारे बताइदिनुस् न ।
यसको आर्थिक महत्व छ । तिहारमा गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिन्छ । मानिसमा क्रयविक्रयको व्यापारिक विकास हुँदा शुरूमा गाईलाई द्रव्यको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । धनकी देवी लक्ष्मी भएकाले धनलाई लक्ष्मी पनि भनिन्छ र धनको रूपमा गाईको प्रयोग गरिएकाले पनि गाईलाई हालसम्म लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने चलन बसेको हो ।